ပန်းဦးချွေသွားခဲ့တဲ့ မောင့်ဖေဖေ (သို့) မင်္ဂလာဦးညမှာကျွန်မကို ပါကင်ဖွင့်သွားခဲ့တဲ့ ယောက်ခမကြီး – CHAR TAKE
ပန်းဦးချွေသွားခဲ့တဲ့ မောင့်ဖေဖေ (သို့) မင်္ဂလာဦးညမှာကျွန်မကို ပါကင်ဖွင့်သွားခဲ့တဲ့ ယောက်ခမကြီး
“ဖြိူး” “စားလေ…ရော့” စားပွဲပေါ်ရှိ ပန်းကန်ထဲက ဘူးသီးကျော်တစ်ခုကို ကောက်ယူပြီး ဖြိုးဆိုတဲ့ ချစ်သူလေးကို ဖိုးကျော်က ခွံ့ကြွေးလိုက်သည်။ ဖြိုးကို ဖိုးကျော် မြတ်မြတ်နိုးနိုးကို ချစ်ရှာသည်။ ချစ်သူသက်တမ်း(၂)နှစ် အတွင်းမှာ လက်ကိုင်ရုံ ပါးလေးနမ်းရုံကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမှ မလုပ်ပေ။ ချစ်ရသောဖြိုးကို ဖိုးကျော် တန်ဖိုးထားသည်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဆင်ဆင်ချင်ချင်နေသည်။ အခွင့်အရေးတွေရှိပေမယ့် မယူခဲ့တာ ဖိုးကျော်ရဲ့ ဖြိုးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းသည်သာ။ ဘူးသီးကြော်ခွံ့ကြွေးနေတဲ့ မောင့်ကိုကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာအချစ်တွေပြည့်နေသည်။ ဒီလိုဂရုတစိုက် ရှိတဲ့သူမို့လည်း ဖြိုးကို သူပစ်သွားမှာကြောက်သည်။ အခွင့်အရေးမယူတတ်သောသူမို့လည်း မောင့်ကို လေးစားမိသည်။ (အခွင့်အရေး ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ပေးဖို့အသင့်ပါမောင်ရယ်)။
“အန်တီ” “ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ကျလဲခင်ဗျ” “ဘူးသီးကြော်တစ်ပွဲတည်းဆိုတော့…ငါးရာပဲကျပါတယ်ကွယ်” ဖိုးကျော် ငါးရာတစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီးသည်နှင့် ကားတံခါးကို ဖြိုးဝင်ထိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်အောင် ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ “မောင့်ရဲ့ ဒီလို ဂရုတစိုက်ရှိမှုတွေကြောင့် ဖြိုး စိတ်ချမ်းသာရပါတယ် မောင်ရယ်”လို့ရင်ထဲမှာ တိုးတိုးလေးပြောနေမိတယ်။ “ ဖြိုးဖာသာ ဖွင့်လို့ရပါတယ် မောင်ရဲ့” “မောင်ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ပေးချင်လို့ပေါ့ ဖြိုးရဲ့…”“ဖြိူဘယ်သွားချင်သေးလဲ… ” “သွားစရာမရှိတော့ပါဘူးမောင်ရယ်” ဖြိုးကိုလမ်းထိပ်ချပေးပြီး ဖိုးကျော် အိမ်ကိုပဲ ပြန်လာခဲ့သည်။ …“သား…လာထိုင်အုန်း” ကျောမှီတဲ့ ပေါ်မှာ နဂါးပုံ ဖော်ထားတဲ့ တတ်မလမ်းသားခုံကြီးပေါ်မှာ မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်သော ဦးဘထူးက အခုမှဝင်လာသော သားဖြစ်သူကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့…ဖေဖေ” ဖိုးကျော် ခါးလေးကိုင်းကာ ဖေဖေ့ရှေ့ရှိ ခုံတစ်ခုံတွင် ထိုက်လိုက်သည်။ ဖေဖေ့ကို ဖိုးကျော် ချစ်ကြောက်ရိုသေသည်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက မိခင်မရှိတော့သဖြင့် ဒီအဖေကပဲသူ့အပေါ်မှာ မိခင်လိုတစ်မျိုး ဖခင်လိုတစ်မျိုး ဒီအရွယ်ထိရောက်အောင် ထိန်းကျောင်းလာခဲ့ရတာ ဖိုးကျော်အသိပါ။ “သားအခု မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်း”“၂၅ နှစ်ထဲမှာပါ ဖေဖေ” “အေး…ဒါဆို ငါ့သားမှာ ချစ်သူရှိလောက်ရောပေါ့” “ဗျာ…” ဖေဖေအခုလို မေးလာလိမ့်မယ်လို့ ဖိုးကျော်မထင်ထားပေ။ ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမှန်းလည်း မသိပါ။ ရင်တွေလည်းတုန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖေ့ဖေ့ရှေ့ကနေ ချက်ခြင်းပျောက်ကွယ် သွားချင်မိတယ်။ “ဖေဖေ…မေးနေတာ ဖြေလေ သား” “ သားမှာ ရည်းစားရှိနေပြီလား” ဖေဖေကထပ်မေးနေတော့ မဖြေလို့မဖြစ်တော့ပေ။ ဖေဖေစိတ်တိုလာလျှင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းသည်။ အရဲစွန့်ပြီး ဖြေလိုက်သည်။ “ဟုတ်ရှိပါတယ်…ဖေဖေ”“ဟား…ဟား….ဟား…” “ငါ့သားက ဘယ်ဆိုးလို့လဲကွ”“ရည်းစာစးတွဘာတွေတောင် ရှိနေပါပေါ့လား”“ဟား …ဟား …ဟား…” ဖေဖေရဲ့ရယ်မောသံကြားမှပဲ စိတ်တွေတည်ငြိမ်စပြုလာခဲ့သည်။
နောက်ထပ်ဘာများ ပြောဦးမလည်းဆိုပြီးနားစိုက်ထောင်နေမိသည်။“ဖေဖေဟာ အခုအချိန်မှာ မိခင်တစ်ယောက်လိုမျိုး သားဖြစ်သူကို မေးနေရှာသည့် အတွက် ဖိုးကျော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပြန်သည်။” “ကဲ သားမှာ ရည်းစားရှိတယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန် သားကောင်မလေးကို ဖေဖေနဲ့တွေ့ဖို့ ခေါ်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလား”“ ဖေဖေတို့က ချမ်းသာပြီးသားဆိုတော့ ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာမလိုဘူးစိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့သူပဲလိုတယ်” “ကဲ…ကဲ သားလည်းသွားတော့ ဖေဖေ သတင်းစာဖတ်လိုက်ဦးမယ်” ဖခင်ရှေ့မှ ဝမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ မိမိအခန်းရှိရာသို့ ခြေလှေမ်းတွေဦးတည်လိုက်သည်။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖြိုးနဲ့တွေ့ရင် ပြောပြဖို့ စကားတွေစဉ်းစားရင်း ည အတော်နက်တော့မှ အိပ်ပျော်သွားသည်။“ဖြိုး” “ပြောလေမောင်ဘာပြောမလို့လည်း”“မောင့်ရဲ့ ဖေဖေက ဖြိုးကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့” “အဲ ဒါဖြိုးဘက်က လိုက်တွေ့ဖို့ရာ အဆင်ပြေမပြေ” “ဖြစ်ပါ့မလားမောင်ရယ် ဖြိုးကဆင်ရဲတော့” ဖြိုးဆီကသိမ်ငယ်တဲ့ စကားတွေ ထပ်မကြားချင်တော့၍ ဖြိုးရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိုးကျော် လက်ဖြင့် ပိတ်လိုက်သည်။
“အဲဒါတွေလျောက်မပြောပါနဲ့ ဖြိုးရယ်” “မောင့်ဖေဖေက ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတတ်ပါဘူး” “အခုလိုခေါ်တွေ့ တာကလည်း ဖေဖေ ကဖြိုးကို အကဲခပ်ကြည့်ရုံသက်သက်ပါ” “ ကျန်တာဘာမှ လျောက်မတွေးနဲ့တော့” “မနက်ဖြန် ဖြိုးကို မောင် လမ်းထိပ်ကနေလာစောင့်ပြီးခေါ်မယ်” “ကဲ…တစ်ခုခု စားပြီးပြန်ကြစို့” ပန်းခြံထဲကအထွက်မှာ ဖြိုးလက်ကလေးကိုဖိုးကျော် အားပေးသည့်အနေဖြင့် ကိုင်လျောက်လာသည်။မနက်ဖြန် ဖေဖေနှင့်သူ့ချစ်သူလေးဖြိုးတို့တွေ့ ဆုံမှုမှာအဆင်ပြေပါစေလို့လည်း ရင်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိသည်။ “လာပါဖြိုးရဲ့ မကြောက်ပါနဲ့” မောင့်ဖေဖေရဲ့အိမ်ကြီးက ခမ်းနားလွန်းလှသည်။မိမိကပိုက်ဆံတအား မချမ်းသာပေမယ့်သူများစားသလိုစားနိုင်သည်။ သူများဝတ်သလိုဝတ်နိုင်သည်။ဒါပေမယ့် မောင့်ဖေဖေရဲ့ ချမ်းသာမှုက သူမကို အားငယ်စေသည်။အိမ်ထဲသို့ ချေလှမ်းရန်ပင် မဝံ့ရဲတော့ပေ။ မောင်ဇွတ်အတင်းဆွဲခေါ်လာလို့သာ မောင့်ဖေဖေရှေ့ရောက်လာရတာ။ ဘေးမှာ မောင်သာမရှိရင် ဒူးတွေခွေပြီးလဲကျသွားနိုင်သည်။
မောင့်ဖေဖေကို မကြည့်ရဲကြည့်ရဲဖြင့်ကြည့်လိုက်တော့ ခန့်ညားလွန်းလှသည်။ မောင်ကသာ အသက်ငါ့ဆယ့်ငါးနှစ်လို့ ပြောမထားရင် လေးဆယ်ကျော်လောက်ပဲ ထင်ရလောက်အောင် မောင့်ဖေဖေက နုပျိုလှသည်။ “ဖေဖေ” “သားသူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ ပါပြီ” ဦးဘထူး သတင်းစာ ဖတ်နေရာကနေ ကောင်မလေးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးအကဲ ခပ်ကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်မလေးက အသားလေးကဝင်းဖန့်ပြီး မျက်နှာလေးကလည်း ချောသည်။ အရပ်ကလည်းမြင့်သည်လို့ပြောလို့ရသည်။ ခါးလေးက လည်း သေးသွယ်သည်။ နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း ကွေးညွှတ်နေသည်။ သားဖြစ်သူရွေးတက်သားပဲလို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောမိသည်။ “ ကဲ ထိုင်ကြ” နှစ်ယောက်သား နီးရာ ခုံတွေမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်။ “သူ့နာမည်က ဖြိုးဖြိူးပါ ဖေဖေ” “ဖေ့ဖေ့နာမည်က ဦးဘထူးတဲ့” “သမီးအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်း ” ဘယ်ကနေစမေးရမှန်းမသိတော့ ဦးဘထူးအသက်ကို အရင်မေးလိုက်ရသည်။
“၁၉ နှစ်ထဲမှာပါဦး” “ကျောင်းကရော ပြီးသွားပြီလား” “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်”“ ဘာမေဂျာနဲ့လဲ သမီး”“အီးမေဂျာနဲ့ပါ ရှင့်” ဖေဖေနှင့် ဖြိုးစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်း ဖိုးကျော်ကြည်နူးမိနေသည်။ ဖြိုးနဲ့ဖေဖေ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့တော့ ဝမ်းသာမိသည်။ ဖြိုးကို ဖေဖေချွေးမအဖြစ် လက်ခံမည့် သဘောမှာရှိသည်။ ဖေတြေို့ ပာနေ တာတော်တော်ကြာပြီလို့ တွေးနေတုန်းရှိသေးတယ် … “သားတို့ အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခဲ့ကြအုန်း။ ဖေဖေအခန်းထဲသွားနားလိုက်ဦးမယ်” “ဪဒါနဲ့…သားသူ့ကို ထမင်းကြွေးပြီးမှပြန်ပို့။ ဒေါ်လေးမြကို ဖေဖေ ထမင်းဟင်းချက်ခိုင်းထားတယ်။”“ သမီးလည်း ထမင်းစားပြီးတော့ မှပဲသွား” “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” ဖေဖေကတော့ ဖြိုးကို ချွေမတော်ဖို့လက်ခံသွားပြီနဲ့တူတယ်။ မောင် ပျော်လိုက်တာ ဖြိုးရယ်။ သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကို လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်ရင်း ဖိုးကျော်နဲ့ ဖြိုးဖြိုး ပျော်လို့ မဆုံးတော့။
ဖေကေ ဇွတ်စီစဉ်လို့သာ ဒီမင်္ဂလာပွဲလေး ဖြစ်လာခဲ့တာ။ လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုအပြုံးကိုယ်စီနှင့် ဧည့်ခံနေကြသည်။မင်္ဂလာဆောင် အခန်းအနားပြီးသွားတော့ဖိုးကျော်တို့တို့နှစ်ယောက်ကို ဦးဘထူးကသူ့အိမ်မှာပဲ ခေါ်ထားလိုက်သည်။“သား…”“ဗျာ…ဖေဖေ” “ရော့…သားတို့အတွက် အခန်းသော့” “ဖေဖေကသတို့ နှစ်ယောက်အတွက်မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင် အဖြစ်ပေးတာ” ဖေဖေကတော့ သူတိုနှစ်ယောက် အတွက် အခန်းသော့ပေးပြီးတာနဲ့ ထွက်သွားသညိ။ ဖေဖေပေးသောအခန်းသော့လေးကိုကိုင်ကာ ပူပူနွေးနွေးဇနီးလေဖြိုးနှင့်အတူ မိမိတို့နှစ်ယောက်အိပ်မည့်အခန်းကို အပြေးလေးသွားကြည့်မိတော့သည်။လုံးဝကိုမထင်မှတ်ထားရလောက်အောင်ဖေဖေ အခန်းကိုပြင်ပေးထားတာပါလား။ ကုတင်နဲ့မွေ့ယာကလည်း နိုင်ငံခြားဖြစ်တွေ။ မှန်တင်ကုန်ကအစ နိုင်ငံခြားဖြစ်တွေ။
မွေ့ယာကိုသေသေခြာခြာကြည့်လိုက်တော့ စပလိန်မွေ့ယာဖြစ်နေသည်။ ဖြိုးက တော့မှန်တင်ကုန်မှာထိုင်ပြီး အလှပြင်ထားတဲ့ပစ္စည်း တွကိုဖြုတ်မလို့လုပ်နေသည်။ဝတ်ထားသောထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီလေးကိုပါ လဲတော့မည်ထင်သည်။ “ဖြိူး”“ပြောလေမောင်” “လက်ဝက်လက်စားနဲ့ ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီတွေကို မလဲသေးပါနဲ့အုန်း” “ဘာဖြစ်လို့လဲ မောင်ရဲ့” “မောင့်ဇနီးလေးကို ဒီသတို့သမီဝတ်စုံလေးနဲ့ချစ်ချင်လို့ပါ” “ဟာ…မောင်နော် ဘာတွေလျောက်ပြောနေ တာလည်း” “ရှက်စရာကြီး”“လျောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဖြိုးရဲ့ နှစ်ယောက်ကောင်းဖို့ပြောတာပါ”“မောင်နော်…သွား” “မသွားပါဘူးဖြိုးရဲ့…ဖြိုးကို ချစ်ရ အုန်းမယ်လေ” ” ဟာကွာ ဒါပဲပြောပြောနေတော့တာပဲ” ဖြိုးဖြိူးရဲ့ သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဖိုကျော်ပွေ့ချီးပြီးကုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ ဖြိုးဖြိုးရဲ့ ပါးလေး ကို စပြီးနမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အောက်ကညီတော်မောင်ကလည်း တောင်လာလေသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ…. “ဖိုးကျော်…ရေ…ဖိုးကျော်” သူ့နာမည်ကို အိမ်အပြင်ဘက်မှလှမ်းခေါ်သံကြားလိုက်ရသည်။
အခုမှအစပျိုးကာရှိသေး အပြင်ဘက်ကခေါ်သံကြောင့် ဖိုးကျော်ဖီးပျက်သွားသည် ။“ဟေး…ဘာလဲကွာ”“ခဏလေးနော်ဖြိုး မောင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုထွက်တွေ့လိုက်အုန်းမယ်” “မင်းရဲ့ မင်္ဂလာဦးညမှာ ငါတို့ကို လိုက်ပြီး ပြုစုဦးမှပေါ့ကွ”ငဟိန်းက စပြီးပြောလိုက်သည်။ “မင်းငါတို့ကိုလိုက်မတိုက်ရင် ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး မပြန်ပဲဒီမှာအိပ်လိုက်မှနော်” ငဝင်းကထပ်ပြီး ချွန်ပေးလိုက်သည်။“ဟာ မင်းတို့ကလဲကွာ…ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်း” “မနက်ဖြန်မှ ငါလိုက်တိုက်မယ်လေနော်” “ငါတို့ကဒီနေ့သောက်ချင်တာ မင်းလိုက်တိုက်မလား မတိုက်ဘူးလား” “ငါတို့တော်တော်တင်းလာပြီနော်” ငဟိန်းနှင့် ငဝင်းတို့ စိတ်ဆိုးမှာကို ဖိုးကျော်မလိုချင်ပါ။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လည်း လိုက်တိုက်ဖို့ဆုံဖြတ်လိုက်သည်။
“ဒါဆိုလည်းခဏစောင့်အုန်းကွာ” “ဖြိုးကို အကြိုးအကြောင်သွားပြောလိုက်အုနားမယ်” “ဟေး…ဒါမှငါ့တို့သူငယ်ချင်းကွ” ငဟိန်းနှင့် ငဝင်းပြိုင်တူပြောလိုက်ကြသည်။ … “ဖြိုး…ဟိုလေ…”“ဘာပြောမလို့လဲမောင် ပြောလေ”“မောင့် သူငယ်ချင်းတွေက ဇွတ်လိုက်တိုက်ခိုင်းနေလို့ အဲဒါ” “ဪ…မောင်ရယ်…ဒါများလိုက်တိုက်လိုက်ပေါ့” “တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် မောင်သာအများကြီး မသောက်ခဲ့နဲ့” “အင်းပါ ဖြိုးရဲ့” “ဒါတွေကြောင့် ဖြိုးကို မောင်ချစ်နေရတာ”“ အဝတ်စားတွေ မလဲပစ်နဲ့နော်” “အင်းပါ” သူ့ရဲ့ အသစ်စက်စက်ဇနီးလေးကို နဖူးလေးနမ်းပြီးဖိုးကျော် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ဘီယာဆိုင်ကို လိုက်သွားတော့သည်။ လက်မလေးတွေထောင်ပေးပါအုန်းနော်… ချစ်သယ်ရင်းတို့ “ဒင်ဒေါင်…ဒင်ဒေါင်….” နာရီသံကြားလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၁၀ နာရီထိုးသွားပြီ။ မောင့်သူငယ်ချင်းတွေ မောင့်ကို အရက်တွေများ မူးအောင်တိုက်နေတာလား ။ မောင်ကလည်းပြန်မလာသေးဘူး။ ဗိုက်တွေကလည်း ဆာနေပြီ။ ဒီအချိန်ထိ ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီကြီးနဲ့ဆိုတော့ အပြင်ထွက်စားဖို့ကလည်းမသင့်ပေ။ မောင့်အဖေတွေ့သွားရင် သူမကို ရူးသွားပြီ ထင်ရင်အခက်ပါ။ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိပါ။
“ဝှီး” “ဖုတ်” “အမလေး…” အိမ်မြှောင်တစ်ကောင် သူမ၏ အပေါ်သို့ကျလာသဖြင့် သူမလန့်ပြီးအော်ပြီနောက်မေ့သွာသည်။ “ဟေ့ …ဘာဖြစ်နေကြတာလည်း” ဦးဘထူးလှမ်းပြီအော်မေးလိုက်သည် ။ စူးစူးဝါးဝါးအော်သံကြောင့် လင်မယားနှစ်ယောက် ရကာစရှိသေးတယ် ရန်ဖြစ်နေတာလားဆိုပြီး စိတ်ပူသွားသည်။ သတင်းစာဖတ်နေသည့် အရှိန်လေးတောင် ပျက်သွားသည်။ ဘာသံမှ ထပ်မကြားတော့ ပိုပြီးစိတ်ပူသွားကာ သားဖြစ်သူ တို့အခန်းရှေ့ရပ်ကာ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်သည် ။ ချွေးမဖြစ် သူဖြိူးဖြိုးက ကြမ်းပြင်တွင်လဲကျနေသည်။ သားဖြစ်သူကို ရှာတော့ အခန်းထဲမရှိ။ ဒီကောင် ဘယ်များထွက်သွားပါလိမ့်။အင်း…မဖြစ်ချေသေးပါဘူးဆိုပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။ချွေးမဖြစ်သူ ဘယ်လိုကနေ သတိလစ်သွားလည်းမသိ။ ဦးဘထူး သတိပြန်လည်အောင်လုပ်နေရသည်။
“ သမီး…သမီး…” ဖြိုးဖြိုးရဲ့ ပခုန်းလေးကိုကိုင်လှုပ်ပြီး ဦးဘထူးခေါ်နေသည်။ “အား…ကျွတ်…” “သမီး သတိရလာပြီလား” “ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး သတိလစ်နေတာလည်းကွယ်” “ဟို…သမီးအပေါ်ကို အိမ်မြှောင်ပြုတ်ကျလို့”ဦးဘထူးအခုမှ သူ့ချွေးမလေးကို သေသေချာချာကြည့်လိုက်မိသည်။ သတို့သမီး ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီကိုအခုအချိန်ထိ မလဲရသေးတာကို သတိထားမိလိုက်သည်။စီးထားသော ပုံ တော်ကတ္တီပါ ဖိနပ်ကလေးကအစ ရှိနေသည်။ ဒီတော့ ဦးဘထူးမ နေနိုင်တော့ပဲ မေးလိုက်သည်။“သမီအခုချိန်ထိ ဘာတစ်ခုမှ မလဲရသေးတာလည်း” “ ဟို…မောင်က သူပြန်လာတဲ့ထိ ဒီပုံစံအတိုင်းလေးထားဆိုလို့ပါ ”“ သူပြန်လာတဲ့အထိဆိုတော့ အဲဒီကောင်က ဘယ်သွားနေလို့လည်း” “သူ့သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ကိုလာပြီး ခေါ်လို့ ဘီယာဆိုင်လိုက်သွားတာပါ ဖေဖေ” “အေးကောင်းကွာ…ပြန်လာမှတွေ့ဦးမယ်…ဒီကောင်တော့လား…”“သမီး…မသက်သာ သေးဘူးလား” ခေါင်းကို လက်ချောင်းလေးေ တွနှင့် ဖိနှိပ်နေရှာသောချွေမလေးရဲ့ ပုခုန်းလေးကို ထိန်းကိုင်ထားရင်းကဦးဘထူး မေးလိုက်သည်။
“ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ကဲထထဒီကြမ်းပြင်ပေါ်အကြာကြီးထိုင်လို့မကောင်းဘူးသမီး ” “ကြွေပြားတွေခင်းထားတာဆိုတော့အေးတယ်… တော်ကြာဖျားနေအုန်းမယ်” “ကုတင်ပေါ်မှာခဏလှဲနေ… ” “ ဒုတ်…” “ဘုန်း…” ချွေးမလေးရဲ့ လက်မောင်းလေးကို ဦးဘထူးကိုင်ပြီး လိုက်အပို့မှာ ကုတင်နားတွင်တစ်ယောက်ခြေတစ်ယောက် ခလုပ်တိုက်မိ သလိုဖြစ်ပြီးဟန်ချက်ပျက်ကာ အသစ်စက်စက် စပရိန်မွေ့ယာကြီးပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သားလဲကျသွားသည်။အသက်ငါးဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ရှိ ဦးဘထူး၏ ကျန်းမာတောင့်တင်းသော ကိုယ်လုံးကြီးအောက်မှာတော့အသက်၁၉နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ထွားလှသော ဖြိုးဖြိုးတစ်ယောက်ပိလို့နေသည်။ “လှလိုက်တာ…သမီးလေးရယ်” မိန်းမဖြစ်သူဆုံးပါးသွားကတည်းက တစ်ကိုယ်ရေနေလာတဲ့ ဦးဘထူးတစ်ယောက်အထိအတွေ့တွေကိုမရှောင်နိုင်တော့ပေ။
သားဖြစ်သူ အခုမှ မင်္ဂလာဆောင်ထားသော မိန်းကလေးပါလားဆိုတာလည်းလသတိမရတော့။ သတို့သမီး ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီလေးနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေရှာသော ဖြိုးဖြိုးရဲ့နုနယ်ပျိုမြစ်တဲ့အလှတရားတွေပဲ မြင်နေရသောကြောင့် ဦးဘထူးရဲ့ အသိစိတ်တွေ ဖုန်းလွှမ်းသွားသည်။ ချွေမဖြစ်သူရဲ့ မျက်နှာလေးကလည်း မိမိ၏ မျက်နှာနှင့်မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဆိုတော့ ချွေးမဖြစ်သူရဲ့ စိုပြည်ပြီးရှင်းသန့်နေတဲ့မျက်နှာ လေးရဲ့ အလှ တရားများကလည်း ဦးဘထူးကို ပိုပြီးရင်ခုန်စေသည်ဦးဘထူးတစ်ယောက် ပါးစပ်ကနေ နှစ်ကိုယ်ကြားရေရွတ်ပြီး ချွေမဖြစ်သူရဲ့ ပန်းရောင်ဆိုးထားထားသော ကော့ညွတ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို အငမ်းမရ စုပ်ယူနမ်းလိုက်မိတော့သည်။ “ပြွတ်…ပြွတ်…” “အွန့်…အွန့်…” ဖြိုးဖြိုးခဗျာ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတာကြောင့် ရှောင်တိမ်းလို့မရတော့ပဲ ဦးဘထူးရဲ့ ငတ်မွတ်တဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ အသံလေး တအွန့်…အွန့်…မည်ရင်း ခံလိုက်ရရှာသည်။ တွန်းထုတ်ဖိုးကြိုးစားတော့လည်း ဦးဘထူးရဲ့ သန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ဘေးလဲကျအောင် မတွန်းထုတ်နိုင်တော့ပေ။
သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းရင်း တဖြည်းဖြည်း မာပြီးကြီးလာသည့် မောင့်ဖေဖေရဲ့အတန်ကြီးကလည်း သူမရဲ့ထိုင်မသိမ်းလုံချည်အောက်က အဖုတ်လေးကို ဖိထားသည်။ နောက်ပြီးတော့ မောင့်ဖေဖေရဲ့ လက်တွေကလည်းအငြိမ်မနေတော့ပဲ သူမရဲ့ လဖက်ရည်ကြမ်းပန်းကန်သာသာရှိသော သူမရဲ့ နို့အုံလေးကို ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျင်္ီပေါ်က နေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်၊ ပွတ်သပ်လိုက်၊ နယ်လိုက်လုပ်နေသည်။ မောင်တစ်ခါမှ မထိမကိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို မောင့်ဖေဖေက အငမ်းမရကိုင်တွယ်နေတော့ စိတ်ထဲမှာလည်း ဝမ်းနည်းတာလိုလို သာယာမိတာလိုလိုဖြစ်နေရပြီ။။မောင့်စောင့်ထိန်းသမျှကိုမောင့်ဖေဖေက တစ်ရက်တည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖျက်စီးပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ တည်ကြည်ခန့်ညားလှတဲ့ မောင့်ဖေဖေက သူ့သားအခုမှယူထားတဲ့ သတို့သမီးလေးဆိုတာလားဆိုတာတောင် သတိမရနိုင်လောက်အောင် အသိစိတ်ကင်းမဲ့သလိုဖြစ်နေသည်။
မျက်လုံးတွေကလည်း ရဲနေပြီး နှုတ်းခမ်းမွှေးတွေလည်းထောင်နေသည်။သူ့သားပြန်မလာခင် ကိစ္စေ တွပြီးပြတ်ဖို့အတွက် ချွေးမပူပူ နွေးနွေးလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံစုပ်နေရာကရပ်လိုက်ပြီး ချွေမလေးရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲပြီး အလယ်မှာ နေရာယူလိုက်သည်။“တော်ပါတော့ ဖေဖေရယ်…မလုပ်ပါနဲ့တော့…”“သမီး ကို သနားပါအုန်း…. “အင့်…ရွှတ်….” ဖြိုးဖြိုး အခုမှတောင်းပန်ပြီး ငိုရှိုက်နိုင်တော့သည်။ သူမအဖုတ်လေးကိုလည်း လုံချည်ပေါ်ကနေ အုပ်ပြီးကာထားသည်။ “ဖေဖေ့စိတ်တွေ ထိန်းလို့မရတော့ဘူးသမီးရယ်” “ဖေဖေ ကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့ကွယ်” ဖိုးကျော် လူမှန်းမသိခင်ကတည်းက ကင်းကွာခဲ့တဲ့ ရာဆိုတော့လည်း ဦးဘထူး လက်မလွှတ်ချင်တော့။ ချွေးမလေးရဲ့ ပေါင်ကိုလည်းဖြဲထားပြီး လိုးဖို့နေရာယူထားပြီးပြီ။ လိုးတော့မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ ပန်းရောင် ထိုင်မသိမ်းလုံချည်လေးကို လှန် ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဝတ်ထားတဲ့ အတွင်းခံ အဖြူရောင်ဘာင်းဘီလေးကို ရိူးရိုးတန်းတန်း မချွတ်တော့ပဲ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို မြင်တွေ့ချင်ဇောကြောင့် ဖြဲပစ်လိုက်သည်။
“ဗြိ…” ဖြိုးဖြိုးမှာအတွင်းခံလေးပြဲသွားသံနှင့်အတူ အဖုတ်လေးက အေးကနဲဖြစ်သွားသည်။အရမ်းလည်းရှက်သွားသည်။ မျက်စိကို စုံပိတ်ပြီ ပေါ်သွားသော ဖုတ်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့် မမှီမကန်းလှမ်းပိတ်လိုက်သည်။ တစိမ်းယောက်ျား တစ်ယောက်ရှေ့မှာထမဦးဆုံး ဖုတ်ဖုတ်လေးပေါ်သွားတာဆိုတော့ တော်တော်တော်အရှက်သည်းမိသွားသည်။ လက်မလေးထောင်ပေးပါခင်ဗျာ။အတန်းတက်ချင်လို့ပါ။ “ဖွေးသန့်ပြီးဖောင်းနေတာပါလား သမီးရယ်” ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ချွေးမလေးရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကြညိ့ရင်း ဦးဘထူးတိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးမှာအမွေးနုလေးသာ ရေးတေးတေး ပေါက်နေသည်ကအူယားစရာ။“ပြွတ်…”“အို…” “အား…အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့…”“သမီးတော့ ငရဲကြီးတော့မှာပဲ…” “ပလက်..ပလက်…” ချွေးမလေးဖြိုးဖြိုးရဲ့ ဖင်သားတွေကို လက်နဲ့လျိုပြီး ပင့်ကိုင်လိုက်ကာ ကြွတက်လာတဲ့ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို ဦးဘထူး လျာပြားကြီးနှင့် လျက်ပစ်လိုက်သည်။
လျာဖျားနဲ့လည်း အစိလေးပတ်ပတ်လည်ကို မွှေပေးလိုက်သည်။ “ပြွတ်…” “ ဖတ်…” ဖုတ်ဖုတ်လေးရဲ့နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကိုလည်း ဦးဘထူးသူ၏ နှုတ်ခမ်းနှင့် ညှပ်ဆွဲပြီး လွှတ်ထည့်လိုက်သည်။ ”အား…” “ဟင့်…” “အို….မရတော့ဘူး….”“ဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဖေဖေရယ်”“ပလက်…ပလက်” ဦးဘထူးမှာ ချွေးမလေးရဲ့ဖင်သားနှစ်ခုကိုကိုင်ပြီးလျက်နေသဖြင့် သူ့ချွေမလေး ပြီတော့မယ်ဆိုတာကို အိစက်နေသော ဖင်းသားလေးများက သူ့လက်ထဲ မှာတင်းလာလိုက် ပြန်အိသွားလိုက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ကြိုသိသည်။ ထို့ကြောင့်အသက်ရှုကြပ်မတတ် နှာခေါင်ပါဖုတ်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထဲ နစ်ဝင်အောင် ဖိလိုက်ပြီးဖုတ်ဖုတ်လေးရဲ့ အတွင်းသားများကို တရစပ်လျက်ပစ်လိုက်သည်။“ပလက်…ပလက်….”“ဟင့်…”“အား…” “ပလက်… ပလက်…” “ဗွက်…” ဖြိုးဖြိုးမှာ ဦးဘထူး၏ အပြုစုအောက်တွင် တင်းနေသောဖင်သားလေးများ ပြေလျော့ကာ အရည်လေးများထွက်ကျကုန်သည်အထိ ကာမ၏အရသာကို သိရှိသွားသည်။
စောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးလည်းသတွေးများနှင့် စောက်ရည်လေးများပါ ပေကျံလျက်သည်။ သတို့သမီးထိုင် မသိမ်းအင်္ကျင်္ီ ပန်းရောင်လေးနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေပြီး ပြီးသွားလို့ ပျော့ခွေသွားတဲ့ ချွေးမလေးကို ဦးဘထူး တပ်မက်စွာကြည့်လိုက်သည်။ မျက်နှာမှားလည်း ရှက်သွားလေးများနီရဲနေသဖြင့် သူမ၏အလှကို ထထပ်ဆင့်လှနေအောင်ချယ်သထားလို ဖြစ်နေသည်။ ဦးဘထူး ပုဆိုးလှန်လိုက်ပြီးလီးကိုထုတ်ကာ စောက်ရည်လေးများရွှဲနေသော ချွေမလေးရဲ့ စိနေသောစောက်ဖုတ်ဖောင်းလေးရဲ့ ကြားထဲကို လီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ထို့နောက် ပြဲလန်နေ သော ဒစ်ပြဲကြီးကို စိနေတဲ့အဖုတ်လေးထဲကိုခါးလေးကော့ပြီး ထိုးထည့်လိုက်သည်။ “ဗြစ်…” “ဗြိ…” “အား…အမလေး…” “သေပါပြီ…နာလိုက်တာ”“ထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဖေဖေရယ်…”“ အ ရမ်းနာလို့ပါ…စပ်လဲစပ်တယ်….” ချွေမလေးဖြိုးဖြိုး လူးလွန့်သွားကာ ညည်းသံပါထွက်လာသည်။ မိမိလီးကြောင့်ဖုတ်ဖုတ်လေးကွဲသွားမှန်း ဦးဘထူးသိသည်။
သားဖြစ်သူ ဖိုးကျော်၏ လီးကတော်တော်သေးတာပဲလို့ တွေးမိသည်။ သူလုပ်လိုက်မှ ချွေးမလေးရဲ့ ဖုတ်ဖုတ်ကကွဲသွားသဖြင့် အရသာတွေ့သွားသည်။ ခါးအားကိုသုံးကာ ဖြေးဖြေးလေးခြင်း ညှောင့်သွင်းသည်။ ညှောင့်ရင်းနှင့် ပင်တစ်စုံတစ်ခုသော အတားအဆီက ဦးဘထူးရဲ့ လီးတစ်ဝက်ကျော်လောက်အဝင်မှာ ဒစ်ထိပ်ကို လာထိမိသည်။ ဦးဘထူး အံ့ဩသွားသည်။ ချွေးမလေးရဲ့အပျိုးအမှေးပါးလေးမှန်းဒက်ခနဲသိလိုက်သလို လီးကြီကလည်း ထိုအပျိုအမှေးလေးကို ထိုးဖောက်ရန်အတွက် တအားမာထောင်လာသည်။ ပန်းရောင်အိပ်ယာခင်းလေးမှာ အပျိုအမှေးလေးပေါက်သွားရင် သွေးစတွေပေသွားနိုင်သည်ကိုတွေးမိသဖြင့် ခုနက ဆုတ်ဖြဲထားသော အဖြူရောင်အတွင်းခံလေးကို ချွေးမလေး၏ ဖင်အောက်၌ ဖြန့်ခင်းလိုက်သည်။
“ဒုတ်…” ဖောက်….”“အား… သေပါပြီ ဖေဖေရယ်”“ကောင်းလိုက်တာ သ မီးရယ်…ချွေးမလေးရယ်” ဖြိုးဖြိုးရဲ့ အပျိုအမှေးပါးလေးမှာ ဦးဘထူး၏ ဆောင့်ထည့်လိုက်သောအရှိန်ကြောင့် ပေါက်ပြဲသွားသည်။ ဦး ဘထူး ဖြန့်ခင်းထားသော အဖြူရောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးမှာလည်း ဖုတ်ဖုတ်လေးထဲမှ ထွက်လာသော သွေးများနှင့် စွန်းပေ သွားသည်။“ဗြစ်…” “ဒုတ်…”“ဗြစ်…” “ဒုတ်…” “ အား…နာလိုက်တာ ဖေဖေရယ်…”“ဖြေးဖြေးလုပ်ပါတော့…”“အမလေး … ” “ကျွတ်…ကျွတ်…” ရှည်လျားတုတ်ခိုင်သော လီးကြီးက သူမရဲ့ သားအိမ်ကို လာထိတိုင်း သူမမှာ အောင့်အောင့်တတ်သွားသည်။ သူမ၏ ဖုတ်ဖုတ်လေးထဲသို့ မဆန်မပြဲဝင်လိုက် ထွက်လိုက်လုပ်နေသောလီးကြီးက ကြီးလှသဖြင့် ဖုတ်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံး ကြိမ်းစပ်နေသည်။
ဒီအခြေအနေထိရောက်မှတော့ သူမလည်း မောင့်ဖေဖေရဲ့ အလိုးကို ဆက်ပြီးခံရုံပဲ ရှိတော့သည်။ ဦးဘထူးမှာလည်း အပျိုစစ်စစ်လေးကို လိုးနေရသဖြင့် ဖုတ်ဖုတ်လေးရဲ့ ကျဉ်းကြပ်တဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရသည်။ “သမီးရယ်….အား….သမီလေးရယ်…” “ဖေဖေ…အား….ဖေဖေရယ်….” “ဗြစ်…” “ဒုတ်…” “ပြွတ်…” “ဗြွက်” တယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ခေါ်ကြရင်း ကာမပန်းတိုင်သို့ ပြိုင်တူတက်လှမ်းလိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ အိမ်ရှေ့မှကာသံကြားရသဖြင့် သားဖြစ်သူဖိုးကျော်ပြန်လာပြီဆိုတာ သိလိုက်သည်။ ဦးဘထူး တွေဝေမနေပဲ ဖြိုးဖြိုးရဲ့ သွေးလေးတွေနဲ့ပေနေသော အတွင်းခံလေးကို ကောက်ယူပြီး ဖြိုးဖြိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်ကာ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ ဖြိုးဖြိုးလည်း သူ့ရဲ့ တွန့်ကြေနေသော သတို့သမီးဝတ်စုံလေးကို သေသေချာချာ ပြန်ပြီးပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ခုနကမှ မောင့်ဖေဖေက သူ့ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို အားရပါးရ လိုးသွားသဖြင့် စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး နာနေသည်။
အခုလည်း မောင်က အရက်မူးပြီး ပြန်လာကာသူမကို လိုးပေအုန်းမည်။ မောင့်အတွက်တော့ သူမစိတ်မကောင်းပေ။ သူမရဲ့ပန်းဦးကို မောင်ကိုယ်တိုင် မယူခဲ့နိုင်လို့ပါ။ မောင့်ဖေဖေကတော့သူမရဲ့ ပန်းဦးကို အဓမ္မ ယူသွားခဲ့သည်။ “ဖြိုး…ရေ…”“မောင့် မယားလေးရေ…”“မောင့်ကို လာတွဲပါဦး…” ဖိုးကျော်အာလေး လျာလေးဖြင့် ဖြိုးဖြိုးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ “မောင် ဘာလို့အများကြီးသောက်လာတာလည်း” “နည်းနည်းလေးပါ….ဖြိုးရဲ့” အခန်းထဲရောက်တဲ့ အထိ မောင့်ကိုတွဲခေါ်လာခဲ့သည် ။မောင့်ဆီကအရက်နံ့တွေကလည်းနံစော်နေသည် ။အခန်းထဲရောက်တော့ မောင်ကဖြိုးကိုမွေ့ယာ ပါ် လှဲချပြီး ထဘီလှန်ကာ စောစောကမှ ဖေဖေ လိုးသွားခဲ့တဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို မောင်က တန်းလိုးသည်။
မောင့်ဖေဖေ့တုန်းကလို သူမကိုမနှူးမနပ်တော့ ဘာအရသာမှမရှိပေ။ ဖုတ်ဖုတ်ထဲက မောင့်လီးက မောင့်ဖေဖေလီးလောက် မတုတ် မရှည်တော့ ဟာတာတာဖြစ်နေသည်။ သူမဘာတွေလျောက်တွေး နေပါလိမ့်။ မောင့်ရဲ့လီးကို မောင့်ဖေဖေလီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မိနေတာပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်သွားမိသည်။ “ပြစ် …” “ကောင်းလိုက်တာ ဖြိုးရယ်” သူမက စဉ်းစားတွေးနေ တုန်းရှိသေးတယ် မောင်ကတော့ ပြီးသွားသည်။ အဟုတ်ကို ဘာမှန်း မသိလိုက်ပါ။ မောင်သာတစ် ယောက်တည်း ပြီးသွားသည်။ သူမကတော့ပြီးလုပြီးခင်လေးမှာ မပြီးလိုက်ရသောကြောင့် ဘတ်သ ငံ့ငံ့ဖြစ် ကျန်ခဲ့သည် “ဒေါ်မြ” “ရှင်” “ကလေးတွေကို မနက်စာ စားရအောင် သွားခေါ်လိုက်ပါဦး” ဦးဘထူး၏ စကားဆုံးသည်နှင့် ဒေါ်မြ ဖိုးကျော်နှင့် ဖြိုးဖြိုးကို ခေါ်ဖို့ထွက်သွားသည်။ ဒေါ်မြဆိုတာက လည်းအခြားလူမဟုတ်ပေ။ ဦးဘထူးနဲ့ အမျိုးတော်သည်။
ဦးဘထူးရွာကို အလှူသွားလှူတုန်းက ဒေါ်မြနေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေတာကိုတွေ့လို့ မြို့ကိုခေါ်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်မှု ကိစ္စလည်းနိုင်နင်းသည်။ ယုံလည်း ယုံကြည် ရသည့် ဒေါ်မြပါပေ။ ခဏနေတော့ ဒေါ်မြနဲ့ အတူ ဖိုးကျော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ပါလာသည်။ ဦးဘထူးကတော့ ခပ်တည်တည်ပင် ကော်ဖီသောက်လိုက် သတင်းစာဖတ်လိုက် လုပ်နေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဖို့ ဒေါ်မြက ကော်ဖီနှင့်မုန့်ကို စီစဉ်ပေးလိုက်သည်။ “သား”“ဗျာ…ဖေဖေ” “မင်္ဂလာဆောင်နဲ့အလုပ်တွေများနေတော့ ကုမ္ပဏီကို ဖေဖေမသွားဖြစ်တာ တော်တော်ကြာ နေပြီ” “ဒီကြားထဲမှာ ဦးစိုးမင်းနဲ့ ဖေဖေလွှဲထားရတယ်”“သားမနက်စာစားပြီးရင် ဖေဖေတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီကို သွားလိုက်ဦး” “ဖေဖေကတော့သားလည်းမိန်းမရပြီဆိုတော့ နားလိုက်ဦးမယ်”“သားက ဦးစိုးမင်းနဲ့တွဲပြီး ကုမ္ပဏီကကို တိုးတက်အောင်လုပ်” “တကယ်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးနားမလည်တာရှိရင် အခက်အခဲရှိရင် ဖေဖေကိုပြော ဟုတ်ပြီလား”“ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဖေဖေ သားသေချာလုပ်ပါ့မယ်”“အေးအေး ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်” ဖြိုးဖြိုးလည်းမနေ့ ကဘာမဖြစ်ခဲ့သလို ဟန်ဆောင်ကာ စားစရာရှိတာစား သောက်စရာရှိတာသောက်နေသည်
နှစ်ယောက်စလုံး ခပ်တည်တည်ပင် ။ ဦးဘထူးတို့ ပြောနေကြတာကို ခေါင်းငုံပြီးစားသောက်ရင်းက နာထောင်နေသည် ။ အမှန်ကတော့ ဦးဘထူး ညစ် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့သားကို ကောင်မလေးအနားမရှိအောင် ဂွင်ဆင်လိုက်သည်သာ။လှပသော ဖြိုးဖြိုးကို အား ပါးတရ ထပ်ချစ် ချင်သေးသည် ။ အခု လည်းကြည့်လေ မနက်စာစားပြီး ထသွားသော ချွေးမဖြစ်သူရဲ့ နောက်ပိုင်းအ လှကို တပ်မက်စွာလိုက်ကြည့်နေသည်။မနေ့ကအဖြစ် အပျက်တွေပြန်တွေးမိတော့ လီးကတောင်လာပြန်သည်။“ကလစ်..” တံခါးဖွင့်သံ တိုးတိုးလေးကြားလိုက်လို့ ဖြုးဖြိုး အိပ်ရင်းလှည့်ကြည့်မိသည်။“ဟင်…” “ဖေဖေ…” “ ဘာလာလုပ်တာလည်း…”“သမီးလေးကို ချစ်ရတာမဝသေးလို့ လာတာပေါ့”“သမီးကို အရမ်းချစ်မိသွားပြီကွယ်” “ရွှတ်…ရွှတ်…ရွှတ်…” ဦးဘထူးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ဖြိုးအိပ်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ဖြိုးရဲ့ နုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးကို သူ့နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းလိုက်တော့သည်။ ဖြိုးဖြိုးရဲ့ပါးပေါ်မှာလိမ်းထားသော သနပ်ခါးများ မှေးမှိန်သွားသည်အထိ ဦးဘထူး နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။
“ဟင့်အင်း…မလုပ်ပါနဲ့တော့…”“လွှတ်…ပါ….” အပေါ် ကနေ အုပ်မိုးပြီး မိမိပါးလေးကိုတရစပ်နမ်းနေသော ဦးဘထူး၏ ခန္တာကိုယ်ကိုကြီးကို တွန်းကာ ဖြိုးဖြိုးပြောလိုက်သည်။ ပြောလို့သာပြော၊တွန်းလို့သာတွန်းနေရတာဦးဘထူးကမိမိ အပေါ်မှာ အဲဒီလိုဇွတ်အတင်း အဓမ္မလုပ်နေတာတွေကို မိမိ၏ မသိစိတ်တွေက ကျေနပ်နေမိတာ။ ဖြိုးကို မောင့်ဖေေ ဖက အဲဒီလို အတင်း အဓမ္မလုပ်လေ ဖြိုးရဲ့ အသွေးအသားတွေက ပိုဆာလောင်လာသလိုပါပဲ။ “ပြွတ်…ပြွတ် ….ပြွတ်…”“ ပလပ်…ပလပ်…ပလပ်….” “ပြွတ်…ပြွတ်….ပြွတ်…” အခုလည်းကြည့်လေ မောင့်လိုဖုတ်ဖုတ်လေးကိုတန်းမလိုးပဲနဲ့ပါးလေးနမ်းလိုက်၊နှုတ်ခမ်းလေးစုပ်လိုက် ၊ နို့လေးစို့လိုက်၊ ဗိုက်သားလေးတွေကို သူ့လျာပြားကြီးနဲ့ လျက်လိုက်၊ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို လျက်လိုက်၊ စောက်စိလေးကိုစုပ်လိုက်နဲ့သူမကို ကာမစိတ်တွေ မထကြွလို့ မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရတာ။
“ပြွတ်…ပြွတ်….ပြွတ်…” “အို…အား…” တဆင့်ပြီးတဆင့်လုပ်လာရင်းကနေ ဖြိုးရဲ့ ဖြူဝင်းပြီးဖောင်းအိနေတဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကိုပါမချန် စုပ်နေတော့ ဖြိုးလေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူး ဖုတ်ဖုတ်လေးကို အလိုးမခံရပဲနဲ့ တစ်ချီပြီးသွားတယ်။ ချွေးမလေး၏ ခါးလေးကော့တတ်သွားသဖြင့် ချွေးမလေးတစ်ချီပြီးသွားမှန်း ဦးဘထူးသိလိုက်သည်။ချွေးမလေးရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကို စုပ်နေတာက ရပ်လိုက်ကာ ချွေးမလေး၏ရင်ဘတ်ပေါ်တက်ခွလိုက်သည်။ ချွေမဖြစ်သူဖြိုးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုမိမ်ကိုယ်လုံးဖိမိမှာစိုးသဖြင့် ဒူးနှစ်ဘက်ကို ဘေးသို့ကားထောက်လိုက်ပြီး ပုဆိုးအောက်စကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ “ဟင်…” မျက်နှာနားတွင်ဝေ့ဝဲကာ ပေါ်ထွက်လာသော မောင့်ဖေဖေရဲ့လီးကြီးက အတော်ကြီးလှသဖြင့် သူမယာင်ပြီး တော့ အသံထွက်မိသည်။
“ကိုင်ကြည့်ပါဦး…သမီးရဲ့…” သူမရဲ့ ဖြူဖွေးနေနဲ့လက်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးညိုညိုတုတ်တုတ်ကြီးကို ကိုင်ခိုင်းတာ။ လီးကြီးက လည်းကြီးလိုက်တာ သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်နှင့်မဆန့်။ ရှည်လိုက်တာကလည်း သူမလက်သီးစုပ်နဲ့ဆိုငါးစုပ်စာ လောက်ရှိသည်။ အကြောတွေ ကလည်း အပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်။ “ဖေ့ဖေ့လီးနဲ့ ဖေဖေ့သားလီး ဘယ်သူကပိုကြီးလဲ”“ဟာ…ဖေဖေကလည်းဘာတွေလာ…” “ပလွတ်…” “အု…” ဖြိုးပြောနေတာလေးတောင်မဆုံးလိုက်ဘူး။ ပြောရင်းတန်းလန်းဟနေတဲ့ ဖြိုးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို မောင်မောင့်ဖေဖေရဲ့လီးဒစ်ကြီးဝင်လာလို့ ဖြိုးမှာအသက်ရှူတောင်ကြပ်သွားတယ်။သူမရဲ့ ခေါင်းကို မောင့်ဖေဖေက လက်နှစ်ဖက်နှင့် ထိန်းကိုင်ထားတော့ ရုန်းလို့ ကမရပေ။“ပလွတ်…ပလွတ်”ဦးဘထူးကတော့ သူ့ချွေးမလေးရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးဒစ်ကိုထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ ချွေးမလေးရဲ့ ပါးစပ်လေးကိုလိုးနေသည်။ ဖြိုးဖြိုးလည်းမထူးတော့ပြီမို့ ပါးစပ်လေးကို အစွမ်းကုန်ဟကာ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လိုးနေသော မောင့်ဖေဖေရဲ့လီးဒစ်ကြီးကို မျက်လုံးကလေးမှိတ်ကာ ငြိမ်ခံနေတော့သည်။
ဦးဘထူးကတော့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ် ခံနေရှာသော ချွေးမလေးရဲ့ နုနယ်တဲ့ မျက်နှာလေး ကိုကြည့်ရင်း ပါးစပ်လေးကို လိုးနေရသဖြင့် ပြောမပြတတ်လောက်အောင် အရသာတွေ့နေသည်။ “ ပလွတ်…ပလွတ်” “ပြစ်…ပြစ်…”“အား … သမီး…သမီး…သမီးလေးရယ်” ချွေးမလေးရဲ့ ပါးစပ်ကို လိုးနေရင်းက စိတ် မိန်းနိုင်တော့ပဲ လရည်များထွက်ကာ ချွေးမလေးဖြိုးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပြီးသွားသည်။ “အွန်း…အွန်း….”“ဂလု…” ဦးဘထူးမှာ သူ့လီးကြီးကို မိမိ၏ ပါးစပ်ထဲမှ မထုတ်သေးပဲ စိမ်ထားသဖြင့် လရည်များကို ထွေးထုပ်လို့ မရပဲ သူမလည်ချောင်းထဲစီးဝင်သွားသည်။ မိမိ၏ ပါးစပ်လေးကို ပါမောင့်ဖေဖေမ ညှာမတာလိုးပြီးပြီး ပါးစပ်ပန်းဦးကိုပါထပ်ခြွေသွားသည်။
“ပလွတ်…” ဦးဘထူး၏ လီးကြီးမှာ ပြီးသွားပေမယ့်လည်း သူမပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာလီးတန်ကြီးက တောင်မြဲတိုင်းတောင်နေသည် အရှိန်မသေသေးပေ။ ဒါတွေကြောင့်မို့လည်းသူမကမောင့်ဖေဖေရဲ့ လီးကြီးကိုမောင့်ရဲ့လီးထက်နှစ်သက်မိတာ။“သမီးရယ်….ချစ်ပြီးရင်း ချစ်မိနေပြီကွယ်” သူမကိုအဲဒီလိုပြောပြီး သူမအဖုတ်လေးကို ထပ်လိုးတာ။ သူမဖုတ်ဖုတ်လေးကို နာရီဝက် လောက်လိုးပြီးမှ မောင့်ဖေဖေ နောက်ချီပြီးသွားသလိုသူမလည်းသူနဲ့အတူတစ်ချီထပ်ပြီးခဲ့ရတယ်။ မောင့်ဖေဖေနဲ့အတူကာမစက်ယှက်ရတာကို ဖြိုးအရမ်းနှစ်ချိုက်သွာမိတယ်။ ဖြိုးမှာ ကျန်သေးတဲ့ ပန်းဦးတွေကိုလည်း မောင့်ဖေဖေဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ယူယူ ဖြိုးငြင်းနိုင်မယ် မထင်တော့ပါဘူး။ ပြီးပါပြီ ။